Umphambili waselwandle eManuel Antonio, iibhedi ezi-2 eVilla Fuego
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguBobby
Indawo egqibeleleyo! I-Villa Fuego ilungile ngaphandle kwendawo ekhuselweyo yonxweme ka-Manuel Antonio iyenza ihambelane nolwandle olufunwa kakhulu eCosta Rica!
Ekuqaleni kuka-2021 sikwanaso nesaphulelo sokwakha. Sidla ngokubhukishwa ngeepesenti ezili-100 kwi-495, kodwa bakha kufutshane nathi ngoko ke sinika izaphulelo ezinkulu! Ngokuqhelekileyo basebenza kuphela ukusuka kwi-8-5 ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu, okuqhelekileyo xa uya kuba selwandle okanye ukonwabela yonke imisebenzi yeendawo!
Sinezindlu ezi-4 ezintle ezinazo zonke izinto eziluncedo zale mihla zekhaya kubandakanya ikhitshi eligcweleyo, iibhedi ezitofotofo zikakumkanikazi, umoya opholileyo, kunye nedama lokutshiza labucala kwivilla nganye. Lala i-5 ngokukhululeka kunye nebhedi eyongeziweyo ephezulu kwi-villa nganye.
4.81 out of 5 stars from 76 reviews
4.81 · Izimvo eziyi-76
Xa sisithi "elunxwemeni" sithetha ngokwenene. Uninzi lweeholide ezirentwayo zithi ziphambi kolwandle kodwa iKlabhu yase-Espadilla yoLwandlekazi yenye yeepropathi ezimbalwa ezikumgama osuka esantini. Kodwa sikufutshane neendawo zokutyela ezinkulu, iibhari, kunye neevenkile, nazo!
Umbuki zindwendwe ngu- Bobby
I-Concierge yoBuqu e-Espadilla Ocean Club
NjengoConcierge wakho wobuqu, ndiya konwaba ngakumbi ukukhathalela zonke iimfuno zakho xa ukwisiza, ukusuka kwisidlo sangokuhlwa ukuya kubhukisho lokhenketho lwaseParasail, ndihlala ndiqinisekisa ukuba ufumana amava afanelekileyo
NjengoConcierge wakho wobuqu, ndiya konwaba ngakumbi ukukhathalela zonke iimfuno zakho xa ukwisiza, ukusuka k…